Jarmalku Maka Aarsan Doonaa Guul Darooyinkii Uu Kala Kulmay Talyaaniga, Euro Semifinal 2012.
Waxaa lagu wadaa ciyaar aad u xiiso badan inay dhexmarto dalalka ugu guulaha badan yurub ee Germany iyo Italy,kaas oo ah kulan Seme Finale ah oo ay isaga hor imaanayaan dalalkaas.
Ciyaartaan oo ka dhici doonto garoonka magaalada Warsow ee dalka Poland ee lagu magacabo National Stadium.
Bastian Schweinsteiger ayaa soo caafimaad qaatay kadib markii anqawga uu dhaawac kasoo gaaray.
Tababare Joachim Loew ayaa suura gal tahay inuu ciyaarsiiyo Mario Gomes,Lukas Podoliski iyo Thomas Mueller kuwaas oo weerarka saddex afle ah uu ku argagax galin doonno dalka Talyaaniga.
Xulka Talyaaniga waxaa ka dhaawacan Giorgio Chiellini, Daniele De Rossi iyo Ignazio Abate oo dhamaan shaki la galinaayo inay kamid noqdan xulka tababare Prandelli ee Talyaaniga.
Schweinsteiger ayaa sheegay in 100% uu wanaagsan yahay caafimaadkiisa isla markaasna uu tababarka si buuxdo u qaatay.
Dhaqtarka xulka talyaaniga Enrico Castellacci ayaa walli kala cadeyn inay imaanayan iyo in kale xidigaha ka dhaawacan Talyaaniga.
“Schweinsteiger waa xidig adag oo qadka dhexe ku haboon,waxaana rajeenaa inuu ciyaarihiisa dib u soo ceshan doonno ayuu yiri Loew.
Miroslav Klose,oo 34 jir ah ayaa lagu soo bilaabaa kulankaan iyadoo la sheegay in xidigaan oo Lazio u ciyaaro uu qeyb ka qadan doonaa fahamsinta xidigaha Germany luqadda talyaaniga.
Ciyaaryahanada xulka Jarmalka ayaa walli xasuusta Seme FINALKII koobka adduunka 2006 oo dalka Jarmalka marti galinayay markaas oo Talyaaniga uu koobka ka reebay xulka Jarmalkla ciyaar ka dhacday magaalada Dortmound.
Tababare Joachim Loew ayaa ayaa isaga xitaa xasuusan maxaa Yeelay wuxuu ahaa gacan yaraha tababare Jurgen klinsmann markaas oo labo gool oo deg deg ah looga badiyay dalka Jarmalka.
Xulka jarmalka ayaa ciyaarsiiyay xulkii ugu da’da yaraa ebed Taariikhda koobkan,waxaana dalka Jarmalka hor taallo aqab ah sidii uu isaga celin lahaa Pirlo oo aad moodo inuu sii yaraanayo kaas oo 33 jir sameeyay baasas kubadeed oo gaaraya 117 jeer,wuxuuna ka badan yahay afarta xidig ee England dhexda ugu ciyaarta.
Kulamaadii hore ee dhex maray.
Labadan dal ayaa kulmay 7 jeer tartamadan oo kale,iyadoo Jarmalka uusan waligiis badinin tartamadas,waxaa uu bar baro la galay talyaaniga 4 jeer,halka saddex jeerna laga adkaaday.
Dalka Talyaaniga ayaa jarmalka ka badiyay labo jeer Seme Finalka koobka adduunka sanadihii 1970 iyo 2006.
Labo jeer oo hore oo ay ku kulmaan koobka Euro ayaa waxaa ay galeen bar baro 1-1 sanadkii 1988 oo ay isku guruub yihiin iyo 1996 oo bar baro 0-0 ay ku dhamaatay ciyaartaas.
Xulka Jarmalka ayaa wuxuu badiyay 15-tii kulan ee ugu dambeeyay wuxuuna rikoor u dhigi rabaa Qaaradda yurub.
Jarmalka wuxuu gaaray lix jeer Seme finalaha koobkan yurub,waxana ay u soo bixi waayeen hal jeer finalka koobkan waxaana ay ahayd sanadkii 1988 oo 2-1 ay xulka Holland ugu badiyay
Xulka Talyaaniga ayaa ku fashilmay inuu u soo baxo finalka koob labo jeer ilaa 10 jeer oo Seme Finalka ciyaaray taas oo la midno ah in labo kulan laga badiyay.
Waxaa lagu wadaa ciyaar aad u xiiso badan inay dhexmarto dalalka ugu guulaha badan yurub ee Germany iyo Italy,kaas oo ah kulan Seme Finale ah oo ay isaga hor imaanayaan dalalkaas. Ciyaartaan oo ka dhici doonto garoonka magaalada Warsow ee dalka Poland ee lagu magacabo National Stadium. Bastian Schweinsteiger ayaa soo caafimaad qaatay kadib markii anqawga uu dhaawac kasoo gaaray. Tababare Joachim Loew ayaa suura gal tahay inuu ciyaarsiiyo Mario Gomes,Lukas Podoliski iyo Thomas Mueller kuwaas oo weerarka saddex afle ah uu ku argagax galin doonno dalka Talyaaniga. Xulka Talyaaniga waxaa ka dhaawacan Giorgio Chiellini, Daniele De Rossi iyo Ignazio Abate oo dhamaan shaki la galinaayo inay kamid noqdan xulka tababare Prandelli ee Talyaaniga. Schweinsteiger ayaa sheegay in 100% uu wanaagsan yahay caafimaadkiisa isla markaasna uu tababarka si buuxdo u qaatay. Dhaqtarka xulka talyaaniga Enrico Castellacci ayaa walli kala cadeyn inay imaanayan iyo in kale xidigaha ka dhaawacan Talyaaniga. “Schweinsteiger waa xidig adag oo qadka dhexe ku haboon,waxaana rajeenaa inuu ciyaarihiisa dib u soo ceshan doonno ayuu yiri Loew. Miroslav Klose,oo 34 jir ah ayaa lagu soo bilaabaa kulankaan iyadoo la sheegay in xidigaan oo Lazio u ciyaaro uu qeyb ka qadan doonaa fahamsinta xidigaha Germany luqadda talyaaniga. Ciyaaryahanada xulka Jarmalka ayaa walli xasuusta Semi FINALKII koobka adduunka 2006 oo dalka Jarmalka marti galinayay markaas oo Talyaaniga uu koobka ka reebay xulka Jarmalkla ciyaar ka dhacday magaalada Dortmound. Tababare Joachim Loew ayaa ayaa isaga xitaa xasuusan maxaa Yeelay wuxuu ahaa gacan yaraha tababare Jurgen klinsmann markaas oo labo gool oo deg deg ah looga badiyay dalka Jarmalka. Xulka jarmalka ayaa ciyaarsiiyay xulkii ugu da’da yaraa ebed Taariikhda koobkan,waxaana dalka Jarmalka hor taallo aqab ah sidii uu isaga celin lahaa Pirlo oo aad moodo inuu sii yaraanayo kaas oo 33 jir sameeyay baasas kubadeed oo gaaraya 117 jeer,wuxuuna ka badan yahay afarta xidig ee England dhexda ugu ciyaarta. Kulamaadii hore ee dhex maray. Labadan dal ayaa kulmay 7 jeer tartamadan oo kale,iyadoo Jarmalka uusan waligiis badinin tartamadas,waxaa uu bar baro la galay talyaaniga 4 jeer,halka saddex jeerna laga adkaaday. Dalka Talyaaniga ayaa jarmalka ka badiyay labo jeer Semi Finalka koobka adduunka sanadihii 1970 iyo 2006.
Labo jeer oo hore oo ay ku kulmaan koobka Euro ayaa waxaa ay galeen bar baro 1-1 sanadkii 1988 oo ay isku guruub yihiin iyo 1996 oo bar baro 0-0 ay ku dhamaatay ciyaartaas. Germany. Xulka Jarmalka ayaa wuxuu badiyay 15-tii kulan ee ugu dambeeyay wuxuuna rikoor u dhigi rabaa Qaaradda yurub. Jarmalka wuxuu gaaray lix jeer Semi finalaha koobkan yurub,waxana ay u soo bixi waayeen hal jeer finalka koobkan waxaana ay ahayd sanadkii 1988 oo 2-1 ay xulka Holland ugu badiyay.
Italy Xulka Talyaaniga ayaa ku fashilmay inuu u soo baxo finalka koob labo jeer Latest News